'टाँगा सफारी'- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
श्रावण १, २०७६ मधु शाही
(बाँके) — ‘टयाक्सी जैसी टाँगामे बैठिए, और रुपैडिया सफारी करिए,’ टाँगावालाले यात्रुलाई लोभलाग्दो शैलीले बोलाउँछन् । अटो र बिजुली रिक्साको बिगबिगी भएको सडकमा यो शैली आकर्षक छ ।
फुर्के डोरीले सजिएको घोडा । काँधमा अडिएको फुलबुट्टे सिट । यात्रु बस्न ‘लग्जरियस’ गद्दा । रहरलाग्दो हुन्छ यहाँको टाँगा सवारी ।
नेपालगन्जबाट सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिया पुग्ने यात्रुलाई यसरी निम्त्याइन्छ । ई-रिक्साको भीडमा टाँगा चालकले यात्रु तान्ने नौलो उपाय रचेका छन्- टयाक्सीजस्तै टाँगा भन्दै ।
नेपालगन्जको पुरानो सवारी टाँगाले अहिले आधुनिक ई-रिक्सासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ । फुलटेक्रामा बस्ने इस्लाम अलिका तीन पुस्ताले टाँगा चलाएरै बिताए । उमेरले ६५ पुगेका उनी पहिले-पहिले नेपालगन्जमा टाँगाले टयाक्सीकै जस्तो मान्यता पाएको सम्झन्छन् । यहाँका धनी, सभ्य र विशेष व्यक्तिले टाँगा चढ्थे । उतिबेलाको एक्काचाहिँ सार्वजनिक बसजस्तै रहेको इस्लामले बताए । ‘एक्कामे उस टाइम जैसे भी आदमी कोचके रख्ते थे,’ उनले भने, ‘उहिसा सार्वजनिक बसमे होता है ।’
महेन्द्र पुस्तकालय प्रमुख ८१ वर्षे सच्चिदानन्द चौवेका अनुसार नेपालगन्जको कुनै बेलाको यातायातका साधन एक्का र टाँगा मात्रै थिए । बयलगाडाले सामान ढुवानी गर्थे । झन्डै ९५ प्रतिशत मुस्लिम समुदाय सवारी चालकको पेसा अपनाउँथे । तत्कालीन राणा, जमिनदार र विशिष्ट व्यक्तिहरूले यहाँ हुर्काएका घोडामा चढ्दैन थिए । भारतमा दौड प्रतियोगितामा हारेका घोडा बिक्रीमा हुन्थे । ठूला मान्छे त्यही दौडमा पराजित घोडा किनेर ल्याउँथे ।
‘घोडाको पनि आर्थिक हिसाबले वर्गीकरण हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हेर्दा चिटिक्कको देखिने घोडामा जमिनदारका आँखा पर्थे ।’ घोडा सवारी बाध्यतासँगै चुनौती पनि रहेको उनले बताए । कच्ची बाटो भएकाले टाँगा जतिबेला पनि दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्थ्यो । त्यसैले उतिबेला गर्भवतीलाई
टाँगा चढाउन प्रतिबन्ध रहेको चौवेले सुनाए ।
नेपालगन्ज उपमहानगर–७ बस्ने ७९ वर्षे अहमद खाँको पूरै जीवन टाँगा चलाएर बित्यो । भारतबाट दौड हारेको घोडा उनले उतिबेला ५ रुपैयाँमा खरिद गरेर ल्याएको बताए । कालो रंगको भएकाले त्यसको नामकरण ‘कल्लु’ राखिदिएका थिए । ‘दिख्नेमे मोटा तन्दुरुस्त था,’ उनी सम्झन्छन्, ‘उसीसे मेरा ८ परिवारका पेट भरता था ।’
कल्लु बूढो भएर बितेको दुई दशक भयो । अहमद भने परिवारप्रति उसले दिएको योगदान सम्झिरहेका छन् । नेपालगन्जदेखि रुपैडिया पुग्न एक घण्टा लाग्थ्यो । ५० पैसादेखि यात्रु भाडा लिन थालेको बताउँदै आफ्नो पालामा २ रुपैयाँसम्म भाडा वृद्धि भएको उनलाई याद छ । अहिले फाट्टफुट्ट चलाइने टाँगाले २५ रुपैयाँ भाडा शुल्क लिने गरेका छन् ।
समय परिवर्तनसँगै नेपालगन्जको प्राचीन सवारी टाँगा र एक्का संकटमा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनीहरू बाध्यताले आधुनिक सभ्यतामा ढल्किँदै छन् । घोडा बेचेर रिक्सा चलाउनुपर्ने नियति यहाँका टाँगा व्यापारीले भोग्दै आएको स्थानीय व्यापारी बिल्लु अन्सारीले बताए ।
गणेशपुर-४ का २५ वर्षे अब्दुल अन्सारीले पुर्खौली घोडा बेचेर ई(रिक्सा किनेको एक महिना मात्रै पुग्यो । ‘घोडा पाल्न चुनौती थपिँदै छ अहिले,’ उनले भने, ‘सोखमा टाँगा चढ्नेहरू छन् । विकल्प धेरै भएकाले टाँगा रोजाइ घट्दै छ ।’
टाँगा र एक्का नेपालगन्ज समाजको व्यापार मात्रै नभई संस्कृतिसमेत रहेको संस्कृतिविद् ७२ वर्षीय विष्णुकुमार कुमालको बुझाइ छ । यद्यपि, टाँगा, एक्का, वयलगाडाजस्ता पुरानो सवारी साधनलाई संस्कृतिका रूपमा जीवित राख्ने दायित्व स्थानीय तहको रहेको उनले बताए । टाँगा सञ्चालन गर्नेलाई हौसला प्रदान गर्न भत्ता दिने, बेलाबखत टाँगा, गाडा, एक्का प्रदर्शन गर्नेजस्ता गतिविधिले यो परम्परा जीवित हुने उनको तर्क छ ।
संस्कृतिविद् कुमालका अनुसार मानव सभ्यता संस्कृति, पशुपन्छी, जीवजन्तु र प्रकृतिसँग आश्रित छ । पछिल्लो समय आधुनिकीकरणले मानव सभ्यता औजार केन्द्रित भएको उनले बताए । मासु खान मिल्ने जनावर पाल्न थाले र परिवार पाल्ने जनावरको बेवास्ता गर्न थालेकाले पनि टाँगा र एक्काजस्ता सवारीसाधन कथा बन्दै गएको उनको बुझाइ छ । ‘जसको मासु खाइन्छ, त्यसलाई मात्रै पाल्नेतिर रुचि बढ्यो,’ उनले भने,‘यसले गर्दा सवारी जन्तु उपेक्षित हुन थाले ।’
प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०९:३९
श्रावण १, २०७६ विपिन श्रीस
काठमाडौँ — कला किन ? कसका लागि ? र केका लागि ? बहस पुरानै हो । चित्रकार प्रकाश रञ्जितले भने आफ्नै लागि कलाकर्म गरे । ललितकलाका यी स्नातकले आफ्नै मनोवैज्ञानिक उतारचढावलाई चित्रमा उतारे, प्रदर्शनीमा ल्याए ।
हालै ग्यालरीबाट बिदा भएका उनी घरमा चित्रहरूकै माझ घेरिरहेकाहुन्छन् । टेबुलदेखि भित्तासम्म चित्र नै चित्र भेटिन्छन् ।
चित्रकलासँग यति धेरै संगतको पछाडि उनको आफ्नै दर्दनाक कथा जोडिएको छ । अनेक कारणले लामो समय उनी डिप्रेसनको सिकार बन्नुपर्‍यो । काठमाडौं झोछेँका यिनले चित्रकलाको नियमित अभ्यासमार्फत डिप्रसेनको उपचार पद्धति थाले ।
अभिभावकको ‘स्पोइलिङ’ (पुल्पुल्याउने) व्यवहार र रुचिको भिन्नताका कारण डिप्रेसनमा फसेको बताउने रञ्जितले मनोचिकित्सको सल्लाहमा चित्र कोर्दै डिप्रेसन मुक्तिको बाटोमा लागेका हुन् । ‘मलाई ‘बोर्डलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर’ भएको थियो ।
डाक्टरले डायरी लेख्न सल्लाह दिएका थिए, मेरो रुचिको विषय भने चित्रकारिता थियो’ डिप्रेसनका कारण आत्महत्याको प्रयास समेत गर्न पुगेका रञ्जितले भने, ‘आफ्नो रुचिको बारेमा डाक्टरसँग परामर्श गरेपछि डायरी लेखनको सट्टा चित्र बनाउन थाले ।’
सिर्जना कलेज अफ फाइन आर्टबाट ललितकलामा स्नातक गरेका रञ्जितले मनोचिकित्सकको सल्लाहअनुसार प्रत्येक दिन जे देखे, जे सोचे त्यसलाई चित्रमार्फत उतार्न थालेको बताए । आफूले बनाएका चित्रहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राममा सेयर गर्दा अन्तरक्रिया बढेको उनको अनुभव छ । यसरी कलाको क्षेत्रमा र सामाजिक रूपमा सक्रिय हुदाँ हल्का महसुस गर्न थालेको उनले सुनाए ।
‘दैनिक चित्र बनाउन थालेको आठ/नौ महिनापछि मेरो अवस्था सुधार हुँदै गयो, आत्मविश्वास बढै गयो,’ रञ्जित भन्छन्, ‘यो अनगोइङ प्रोसेसमा छ, डिप्रेसन हुन समय लिएजस्तै निको हुन पनि समय लाग्दो रहेछ । अहिले पनि पूर्ण रूपमा डिप्रेसन मुक्त भएको दाबी गर्दिनँ म ।’
कलामार्फत बाहिरी संसारमा परिचित गराउन भने उनलाई आर्टिभिस्ट अस्मिना रञ्जित र श्रीमतीले सघाएको सुनाए । रञ्जितले डिप्रेसनबाट मुक्त हुने क्रममा कोरेका चित्रहरू संकलन गरी नेक्सस कल्चरल सेन्टरमा हालै ‘नट जस्ट अ नम्बर’ शीर्षकको एकमहिने एकल प्रदर्शनीसमेत गरिसकेका छन् ।
प्रदर्शनीमा उनले प्रत्येक दिन बनाएका तीन सय ६५ चित्र राखेका थिए । उनी अहिले पनि दैनिक रूपमा चित्र बनाउँदै आएका छन् ।
आर्टिभिस्ट अस्मिना रञ्जितले प्रकाशको चित्रमा उनको आफ्नै मानसिक अवस्था, काठमाडौंको अस्तव्यस्त सहरी जनजीवन,फेन्टासी, व्यंग्यलगायतका विषयवस्तु देख्न सकिने बताइन् ।
‘प्रकाशका सबै चित्र मलाई उत्तिकै मात्रामा मन पर्दैन,’ प्रकाशलाई डिप्रेसन मुक्त हुन सहयोगसमेत गरेकी आर्टिभिस्ट रञ्जितले भनिन्, ‘प्रकाशका चित्रहरूले उनको मानसिक अवस्था र समस्याबाट पार पाउन उनले गरेको प्रयास दुवैलाई देखाउँछ ।’ चित्रकलामार्फत पनि मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा ‘डिस्कोर्स’ चलाउन सकिने आर्टिभिस्ट रञ्जितको मत छ ।
प्रकाशजस्तै कैयौं विद्यार्थी पनि आफ्नो रुचिको विषयभन्दा अभिभावकको दबाबमा पढ्न बाध्य हुन सक्छन् । यसले समस्या ल्याउन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन विद्यार्थीभन्दा पनि अभिभावक बढी जिम्मेवार र सचेत हुनुपर्ने आर्टिभिस्ट रञ्जितले बताइन् । डिप्रेसनमा नजान र डिप्रसेनमुक्त हुन विचार, मनोभाव साटासाट गर्नुपर्ने प्रकाशको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘हामीले हाम्रो कथा भन्नुपर्छ ।
प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०९:३६